फिफाको नयाँ वरियता: इंग्ल्याण्डले ऐतिहासिक रेकर्ड राख्दा नेपाल कुन स्थानमा ? | Kendrabindu Nepal Online News
फिफाको नयाँ वरियता: इंग्ल्याण्डले ऐतिहासिक रेकर्ड राख्दा नेपाल कुन स्थानमा ?
२१ चैत्र २०७५, बिहीबार १६:२९
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय ‘फिफा’ ले नयाँ बरियता क्रम सार्वजनिक गरेको छ । फिफाले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नयाँ बरियतामा नेपाल १ सय ६१ औं स्थानमा यथावत रहेको हो ।
यसअघि पनि नेपाल १ सय ६१ औं स्थानमा थियो । नेपालले हालै कुवेतसँगको दुई मैत्रीपुर्ण खेलमा हार व्यहोरेको थियो । दक्षिण एसियामा भारत शिर्ष स्थानमा छ । १ सय ३ औं स्थानमा रहेको भारत दुई अंक सुधार गर्दै १ सय १ औं स्थानमा पुगेको छ । १ स्थान सुधार गर्दै माल्दिभ्स १ सय ५१ औं स्थानमा पुग्दा नेपाल १ सय ६१ औं स्थानमा छ ।
भुटान १ सय ८६ औं, बंगलादेश १ सय ८८ औं , पाकिस्तान २ सय औं तथा श्रीलंका २ सय २ औं स्थानमा छ । बेल्जीयम शीर्षस्थानमा रहँदा विश्वकप विजेता फ्रान्स दोस्रो स्थानमा छ भने बाज्रिल तेस्रो स्थानमा छ । १ स्थान सुधार गर्दै इंग्ल्याण्ड इतिहासमै पहिलो पटक दोस्रो उच्च बरियतामा आइपुगेको हो ।
यसअघि पाँचौं स्थानमा रहेको इंग्ल्याण्ड विश्वकप उपविजेता क्रोएसियालाई पछि पार्दै चौंथो स्थानमा पुगेको हो ।
Prevम पार्टीभित्रै बेरोजगार भएँ- बामदेव गाैतम
आईपीएलमा आज सन्दीप र रसिद खानको भिडन्तNext
फिफा बरियतामा नेपालको फड्को, अर्जेन्टिना दशैंस्थानमा
फिफा वरीयतामा फेरि तल झर्यो नेपाल
फिफा बरियतामा नेपालको एक स्थान खस्कियो : बेल्जियम शीर्ष स्थानमा
फिफाको वरियताक्रममा भुटान भन्दा नेपाल तल